वैयक्तिक निबन्ध | मझेरी डट कम
editor — Mon, 10/19/2020 - 20:08
श्रममा खुलेको मृदुल सरगम सुनिरहेछु । कलकल बगिरहेछ जीवन, छलछल चलिरहेछ जीवन । कलकल बगिरहेको जीवन पिइरहेछु । मस्त उमङ्गमा जिइरहेछु । दुःखका विद्रुप छायाँहरुले बिदा लिँदा छन् । जीवन मोहनिन्दार देखिँदो रहेछ । पसिनाले लथपथ छु र पनि सुखी छु । विहानीको पाँच बजेदेखि बेलुकीको आठ बजेसम्म श्रमरत छु, हाडगोडा मिहेनत गरिरहेछु र पनि सन्टुष्ट छु । पाँच बजे घरबाट निस्केको मान्छे आठबजे घर फर्किँदा पसिनाले लथपथ हुन्छु । पसिनाले शरीर भिज्छ, लुगा भिज्छ गर्मीमा प्रत्येक रात नुहाउँछु । एक ताजगीमा विश्राम गर्छु । पुनः सवेरै उठेर कर्मपथमा डट्छु । मेरो शरीरबाट कतिमाना पसिना बग्यो होला ? अनुमान लगाउन सक्तिन । तर पसिनाले एक मस्ति दिइरहेछ ।
editor — Mon, 08/10/2020 - 08:42
आजको परिवेश भिन्न छ । म यो बन्द कोठामा एउटा कुनामा सिरक ओडेर भित्ताको सहारामा छु । के गर्नु र सहारा दिने अरु कोही भएन । बत्तीले आफ्नो उज्यालो दिने काम गरिरहेको छ । लक्ष्मीनगर, यो सुनसान वातावरणमा कयौं रात यही भित्ता, बत्ती र टेबलमा रहेकी उनीसँग भलाकुसारी गरेर बिताएको छु । ऊ सदैव मेरो साथको लागि लडिरहेकी हुन्छे, ऊ मेरे छेउमा आउँछे र मलाई सान्त्वना दिन्छे । निदाउन नसकेको देखेर होला ऊ पनि चिन्तित छे । किनकि भोलि उसलाई धेरै कुराहरू बुझाउनु छ मलाई ।
एकपल्ट हारेँ तर जित्छु
editor — Tue, 08/04/2020 - 06:49
यस वर्षे भेलमा न्यानो अभिवादन ।
प्यारा नानीबाबुहरू ! अरू कुरा जोड्नु अघि तलको माँ दिव्या अर्थात् आश्माजीका गीतिशब्द गुनगुनाउँदै कलम दगुराएँ है त !
फूल किन फुल्छ बाबै फूल किन फुल्छ
थाहा नै छ उसलाई भरे मर्नुपर्छ ।
editor — Sun, 07/12/2020 - 11:53
तासमा मात्र होइन, जिन्दगीमा पनि हुने रै’छ –कट्फर ।
‘खानका लागि बाँच्ने कि बाँच्नका लागि खाने ?’ वहुधा मानिसहरू अल्झने भनेको यसैमा हो । आफ्नो जीवन कुन र कस्तो शैलीमा बाँच्ने भन्ने छुट सबैलाई हुन्छ । मानिस बन्धनमा होइन स्वतन्त्र भएर जिन्दगी जिउन चाहन्छ । सफा नीलाकाशमा स्वच्छन्द वेग हान्दै उड्ने चरी पंक्षीजस्तै हुने रहर उमेरमा जसकसैको हुन्छ । तर जब उमेरका सरहद नाघेर मानिस बुढ्यौलीका फालकमा आइपुग्छन् अनि उसलाई जीवनको माने मतलव थाहा हुँदो रहेछ । उमेरमा अल्छी र बुढेसकालमा जाँगरिला मानिसहरू धेरै देखिन्छन् । सायद् तिनीहरूले भोगेर सिकेको हुनुपर्छ ।
editor — Wed, 01/22/2020 - 19:41
सातमध्ये गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम गरेर तीन प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकियो । अधिकांश प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने काममा माथापच्ची भइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा माथिको शीर्षकले राजनीति गन्थन मन्थनलाई सङ्केत गर्छ । यद्यपि यहाँ राजनीतिको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन ।
editor — Mon, 11/19/2018 - 00:32
भगवान् विष्णुलाई सोधेँ ईश्वर मेरो जीवनको मूल्य के हो ? कति स्तरसम्ममा म मान्छे बन्छु । उनले हाँसेर उत्तर दिए बाबु तिमी अहिले बच्चै छौ । तिम्रो जीवनको मूल्य तिमीले सोचेभन्दा कैयौँ गुणा धेरै छ । म अलमल्ल परेँ । उनी अन्तर्धान हुन हतारिँदै थिए, मैले पाउ समातेर भनेँ प्रभु म दुनियामा किन नाजायज भइरहन्छु । उनले एक मीठो मुस्कानमा भने बाबु तिमीले ज्ञानको कुरा बुझिसकेका छैनौ । मैले फेरि सोध्न खोज्दै थिएँ उनी त अलप । सारा जिन्दगी अलप । के ईश्वर पनि दोधारे परीक्षामा मलाई उत्तीर्ण भएको हेर्न चाहन्छ । मैले आफ्ना प्रश्नहरू मेरा अघि पाउलिएर लहलह भएका कुटमिराका बुट्यानलाई सोधेँ, छेउका सीमालीलाई सबै मेरो खिल्ली उडाइरहेका थिए । म अलमल्ल पर्दै छेउको धारालाई कलकल पानी कहाँ गयो भन्दै गर्दा ती पनि अलप भए । वरपिपलले आफ्ना कुरूप शरीरमा वासना नभएको गन्थन गर्दै थिए । म मगन्ता माग्ने टोकरीमा सर्वश्व खोज्दै भीडमा बढारिएँ ।
editor — Tue, 11/06/2018 - 17:49
म के लेखुँ? र म के नलेखुबाट लामो समय गुज्रिरहे। लेख्नु र नलेख्नुको अन्तर र प्रभाव केलाउदा केलाउदै दिन गए। स्वान्त सुखायको लागि केही लेख्ने कि भन्ने त पहिलेदेखिनै लागेको थियो तर के लेख्ने? भन्ने चाहिँ धेरै भएको छैन।
भित्र आगो छ त्यही लेख्ने कि? तर कसरी त्यो त अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ। पर्दाले छेकेर भित्री कुरा देखिदैन र बाहिर आउन सकिरहेको छैन। कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्छ जीवनै लेखिदिऊँ तर कसरी जब कि म बबुरो न परे जीवन नबुझेको मान्छे।
editor — Tue, 10/30/2018 - 03:17
मेरी छोरी सेतो कोट देख्दा डराउँछिन्। मलाई पनि तर्साउने जस्तो लाग्छ। हो, उही रूपमा बगेको छ खोलो। ढ्याङ्ग्रो बजाएर जोखाना राख्ने सोच अन्धविश्वास हो कि टाउको दुख्दा पेट दुखेको औषधी टक्र्याएर फेरि निको नभई दुई दिनपछि आउनु होला भन्ने मन्त्र रूपी डाक्टरसाबको वचनमा विश्वास गर्ने ? रकेट बनायो, प्लेन उडायो, गाडी गुडायो, मेसिन चलायो, आविष्कार गर्यो। भौतिक उन्नति भयो नि हजुर। अनि पृथ्वी घुम्छ भन्या छन्, विश्वास त गर्नैपर्यो। तर्क बोकेर प्रमाण हो भने पनि म लाचार छु। यहाँ कैयौँ बालकलाई सारा वैज्ञानिकका नाम रट्दै हैरान।
editor — Mon, 03/12/2018 - 00:00
कतै पढेको छु, या सुनेको छु; चिलले सारै अग्लो ठाउँमा गुँड लगाउँछ अरे । अग्लो ठाउँमा गुँड लगाउनुको अभिप्राय एक त शत्रुबाट बँच्नको रचिएको तरकीब होला । अर्को, आफ्ना बच्चाहरुलाई सानैदेखि उडानमा निष्णात बनाउन र बच्चामै जोखिम सिकाउनको लागि उच्च ठाउँमा गुँड लाउँदो हो । जब ओथाराबाट चिलका बच्चा निस्किन्छन्, बच्चाका प्वाँख नउम्रिन्जेल त बच्चालाई आहारा जुटाउने काम माउले नै गर्छ । नानीहरुका पखेटा उम्रेपछि भने चीलले आफ्नै गुँड भत्काउन सुरु गर्छ ।
जनम-जनम बाँच तिमी
आज फेरि एउटा मुटु, टुक्रिएर रोएको छ
सुर्के थैली खै
आँखा भित्र आँशुको
मुक्तक: तिम्रै छेउ बसि गजल कोर्दै छु !! नेरुता मोक्तान
दुई मुटुको मेल
स्याल र मृग
के छ गधाले बोकेको फलामको बाकसमा ?